दोस्रो लहर नसकिंदै बजार खुल्यो- सङ्क्रमित बढे – Nepal Japan
दोस्रो लहर नसकिंदै बजार खुल्यो- सङ्क्रमित बढे
दैनिक तीन हजारको हाराहारीमा संक्रमण पुष्टि हुनुलाई घटेको भन्न नमिल्ने
नेपाल जापान २४ असार १३:५१
काठमाडौं उपत्यका लगायत देशका विभिन्न शहरमा स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डका सामान्य नियमहरुको पालना गर्ने गरी निषेधाज्ञा खुकुलो गरिएसंगै कोरोना संक्रमित बढ्न थालेका छन् । जनस्वास्थ्यविदहरुले यसलाई राम्रो संकेत मानेका छैनन् र उनीहरु निषेधाज्ञा खोल्ने बेलै नभएको बताइरहेका छन् ।
सरकारले कोरोना संक्रमितको सङ्ख्या घट्दै गएपछि निषेधाज्ञा खुकुलो पार्दै लगेको तर केही दिनको तथ्यांक हेर्दा स्थिति सामान्य नभएको स्पष्टै देखिन्छ । बुधबार अघिल्लो २४ घण्टामा झन्डै तीन हजार जनामा संक्रमण देखियो । दैनिक दुई हजार जनाको हाराहारीमा संक्रमण झरिसकेको अवस्थामा दैनिक क्रमशः बढ्दै गई तीन हजारको हाराहारीमा पुगेको छ ।
वरिष्ठ भाइरोलोजिस्ट डा. वासुदेव पाण्डे निषेधाज्ञा खुलाउन सरकारले हतार गरेको बताउनुभयो । एक हजार, एक हजार पाँच सयको सङ्ख्यामा घटिसकेको संक्रमण यातायात लगायत बजार पसल खुलेसँंगै बढेको जानकारी गराउँदै उहाँले दैनिक तीन हजारको हाराहारीमा सङ्क्रमण पुष्टि हुनुलाई घटेको भन्न नमिल्ने र जनस्वास्थ्यको मापदण्डबिना चललपहल बढ्नु ठीक नभएको बताउनुभयो ।
दोस्रो लहरको सङ्क्रमण चरमबिन्दुमा पुगेका बेला एक महिना अघि दैनिक नौ हजार चार सयसम्म कोरोना संक्रमित पुष्टि भएको थियो । बुधबार सात हजार ८३५ जनाको पीसीआर र चार हजार ६३ जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा दुई हजार ९ सय ७९ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो । योसहित नेपालमा कुल सङ्क्रमितको सङ्ख्या छ लाख ९० हजार ९ सय ७४ पुगेको छ ।
अहिले पनि राजधानी काठमाडौं उपयका लगायत नौ जिल्लामा पाँच सयभन्दा बढी सक्रिय संक्रमित रहेका छन् । उपत्यकाका तीन जिल्लाका साथै चितवन, रसुवा, कास्की, झापा, सुनसरी, मोरङ जिल्लामा पाँच सयभन्दा बढी सक्रिय संक्रमित छन् ।
देशभर सक्रिय सङ्क्रमित २३ हजार ७ सय ५६ जना रहेका छन् । यसअघि कोरोना अत्यधिक वृद्धि हुँदा देशभर एक लाख १७ हजारसम्म सक्रिय संक्रमित पुगेका थिए । बुधबार काठमाडौँमा ३९०, भक्तपुरमा ६७ र ललितपुरमा ८६ जना गरी काठमाडौँ उपत्यकामा ५४३ जना संक्रमित थपिएका छन् । यस्तै देशभरका अस्पतालका आईसीयूमा ५७१ र भेन्टिलेटरमा १६१ जना संक्रमित उपचाररत रहेका छन् ।
संक्रामक रोग विशेषज्ञ डा. जनक कोइरालाका अनुसार दोस्रो लहरको जोखिम कायमै रहेको समयमा निषेधाज्ञा खुकुलो बन्दा संक्रमण बढेको हुनसक्ने बताउनुहुन्छ । पहिलो लहरमा पनि निषेधाज्ञा खुकुलो बनाएको केही समय संक्रमण बढे पनि पछि घटेको भन्दै उहाँले सरकारले निषेधाज्ञा खुकुलो बनाएपछि जनताले पनि कोरोना गयो भन्ने सोच्छन् । जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालनामा लापरबाही हुन जान्छ । त्यसको परिणाम स्वरुप संक्रमण बढ्न जान्छ । पछिल्लो तीन दिन यता संक्रमण बढ्नु पनि त्यसैको परिणाम हुन सक्छ ।
यही आधारमा संक्रमण बढ्दै गएर फेरि ८/९ हजार पुग्यो भने त्यसलाई तेस्रो लहर भन्न सकिने तर संक्रमण घट्ने वा बढ्ने आधार एक दुई हप्तापछिको तथ्यांकलाई विश्लेषण गरेर मात्रै भन्न सकिने उहाँ बताउनुहुन्छ । नेपालमा तेस्रो लहर आउनका लागि डेल्टाबाहेकको नयाँ भेरियन्ट देखिनुपर्ने उहाँको तर्क छ ।
अर्का संक्रामक रोग विशेषज्ञ डा. प्रभात अधिकारी संक्रमण बढ्नुलाई दोस्रो लहरकै निरन्तरता भएको बताउँदै भन्नुहून्छ ‘डेल्टा भेरियन्ट बढी संक्रामक पनि छ । पछिल्लो केही दिनयता चहलपहल पनि बढेको छ । यसले संक्रमण बढेको हुनसक्छ’ ।
सरकारले दोस्रो लहरमा कोरोना संक्रमण तीव्र रुपमा बढेपछि गत वैशाख १६ गतेदेखि काठमाडौं उपत्यकामा निषेधाज्ञा लगाएको थियो । तर संक्रमण घट्दै गएपछि जारी निषेधाज्ञा असार ८ गतेदेखि केही खुकुलो बनायो । असार १५ गतेदेखि निषेधाज्ञा थप खुकुलो बनाएको थियो ।